China dhagax dhogorta dhogorta kululaynta dahaadhka buste iyo saarayaasha |Kingflex
Bustaha dahaarka ee Kingflex Rock ayaa leh faa'iidooyin badan sida culeyska fudud, waxqabadka wanaagsan guud ahaan iyo isku xirnaanta kuleylka kuleylka.Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhismaha iyo qalabyada kale ee goobta ilaalinta kulaylka.Waxa kale oo ay leedahay shaqo wanaagsan oo ah nuugista codka, sidaas darteed waxaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo buuqa warshadaha iyo wax ka qabashada nuugista codka ee dhismaha.
Kingflex dhogorta dhagaxa ah waxaa lagu soo saaraa basalt dabiici ah oo ah walxaha ugu muhiimsan, dhalaalay heerkul sare oo laga sameeyay abiio-fibers macmal ah iyadoo la adeegsanayo qalabka sentifugal ee xawaaraha sare leh, ka dibna lagu daray agglomerates gaar ah iyo saliid boodh ah, kuleyl iyo xoojisay alaabooyin kala duwan oo ilaalinta kulaylka dhogorta dhagaxa ah ee kala duwan. tilmaamo iyadoo loo eegayo shuruudaha kala duwan.
cimilada qabow, waxaa sidoo kale loogu talagalay in lagu ilaaliyo hawada qabow xilliga cimilada kulul.Kordhinta waxtarka tamarta ee dhismaha waxay sidoo kale macnaheedu noqon kartaa dhimista biilasha iyo kharashyada hawlgalka.
Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo alaab ah oo dahaarka ah oo loogu talagalay codsiyada saqafka fidsan ama fidsan.Laga soo bilaabo birta, shubka ama saqafyada diirran ilaa laynka raafka ama dahaarka saqafka sare, alaabta ROCKWOOL waxa laga sameeyaa dhogorta dhagaxa qaaliga ah si ay guryahaagu ammaan ugu noqdaan iyo jawiga gudaha oo raaxo leh.
Dusha sare ee waxqabadka kulaylka wanaagsan, guryaha u adkaysta dabka iyo dhawaaqa ee bustaha dhogorta dhagaxa ah ee Kingflex waxay sidoo kale u oggolaanayaan xoriyad dheeraad ah naqshadahaaga.
Dhagaxa dhogorta leh ee maro muraayadda ah ayaa la dareemay tolidda shabagga
cabbirka mm Dhererka 3000 ballac1000, dhumucdiisuna tahay 30
Ku rakibida dahaarka wax ku oolka ah ee guryaha iyo guryaha ganacsiga waxay yarayn kartaa shuruudaha kulaylinta ilaa 70%.1 Kuwa aan si wax ku ool ah u daboolin waxay lumin karaan ku dhawaad ​​rubuc kulaylka saqafka.Sidoo kale hawo diirran oo baxsanaysa, waxaa jirta fursad ah in hawada qabow ay sidoo kale ka soo gasho saqaf aan qaab fiican lahayn.
Cimilada kulul caksigeeda ayaa dhici karta, halkaasoo ay muhiim tahay in dhismuhu qaboojiyo.
Dahaarka ayaa ka caawiya ilaalinta heerkulka saxda ah ee dhismaha, si aad u hesho hal-abuur leh natiijooyinka.Saqafka sare u rog meel lagu noolaado ama qol jiif oo dheeri ah, ama saqaf fidsan u rog barxad soo dhawaynaysa ama saqaf cagaaran.
Hore: fiber galaas dhogorta dahaarka kulaylka
Xiga: Dhagax dhogorta dahaarka Boad
Busto dahaarka kulaylka
Bustada kuleylka kuleylka
Busta daboolka dhogorta dhagaxa
Iibka kulul ee Kingflex Kulaylka caagga ah ee caagga ah...
Dhumucda 19mm ee duubka xaashida dahaadhka ee Kingflex
Saxan caag caag ah